Archive du 07-avril-2022
Andry Rajoelina Hanara-dia an-dRavalomanana…
Mihena am-pitoerana tahaka ny fen’antitra ny herijika politikan’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina. Ambany ny vintana mbola hahalany azy fanindroany amin’ny 2023, raha ny lojika ara-politika,
Baolina kitra Hanangana Akademia eto ny Paris Saint-Gérmain…
Ao anatin’ny vina hoenti-mampiroborobo ny kitra Malagasy, hitsangana eto Madagasikara tsy ho ela ny ivon-toeram-panofanana, tanineketsa hanomanana sy hamolavolana ireo tanora ho matihanina amin'ny baolina kitra dia PSG Académie
Sosialim-bahoaka Hanamafy ny krizy ny andrakandrana isaky ny mihetsika
Rehefa mandinika lalina ny zava-misy amin’izao fotoana dia tsapa mazava tsara mihitsy fa miaina amin’ny andrakandrana sy ny kitsapatsapa n’ny fitondrana Rajoelina.
Varotra zazamenavava, taolam-paty,… 5 monja amin’ny 80 tapitrisa ny an’ilay reny
Mpivarotra zaza mena ary mpanao aferana taolam-paty sy menaka azo avy amin'olombelona no tra-tehaky ny Polisi'ny PPA 3 tetsy Ankadimbahoaka ny Alatsinainy maraina lasa teo tokony ho tamin'ny 10 ora maraina.
Fitantanana firenena Voadidina vehivavy ny Filoha
Voamarina ny resabe nandeha efa hatry ny talata takariva teo momba ny fanendrena ny Minisitry ny tontolo iainana teo aloha Rtoa Baomiavotse Vahinala Raharinina ho Tale Kabinetra sivily eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika.
Kit TV Solaire azo aloha tsikelikely Tolotra vaovaon'ny Canal+ sy ny Baobab
Namoaka tolotra vaovaobe ny Canal plus Madagascar. Hisy ary azo raisina eny anivon'ireo toeram-pivarotana mpaninjaran'izy ireo manomboka izao « Kit TV Solaire ».
Fitakiana vatsim-pianarana Nitroatra ihany koa ny ENS Ampefiloha
Taorian’ny teny Ankatso afak’omaly, ny mpianatry ny ENS (Ecole Normale Supérieure) indray no nitokona sy nidina an-dalambe omaly alarobia 06 aprily 2022.
Fiadidian’ny Repoblika Nesorina sahady i Soatiana Rajoelisoa
10 volana monja taorian’ny nanendrena azy ny volana jona 2021, dia nesorina tamin’ny toerany ny Talen’ny seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika Rtoa Soatiana Rajoelisoa.
Fampidinana ny vidin’entana Tena tsy afaka manao don-tandroka ve Fanjakana?
Tena henjana ny fifehezana ny vidim-piainana, ary io lasa adihevitra io mikasika ny fameran’ny Fanjakana ny vidin’entana farany ambony azo ampiharina.
EPP Ankofafa Fianarantsoa Latsakemboka 4 tapitrisa Ar voahodinkodina
Mpikambana ao anatin’ny Fikambanan'ny Ray aman-dRenin'ny mpianatra miisa 5 no fantatra fa arahi-maso ara-pitsarana ao Fianarantsoa.
Mpianatra mbola tsy nahazo karatra Haloa faobe eny amin’ny Paositra ny vola
Efa nalefa any amin’ny Minisiteran’ny Paositra ny lisitry ny mpianatra tokony hahazo ny vatsim-pianarana, izay efa voamarin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa (MESUPRES),
CHRD Anosibe an'ala Nahazo « radiographie » nomerika
Manomboka amin'ny 40.000 Ar ka hatramin'ny 60.000Ar ny manao « radiographie» amin'izao eto an-drenivohitra.
Teknolojia sy ny fizahantany eto Iarivo Hamoraina ny fitadiavana trano fandraisam-bahiny
Hamboarina ny ”application” ahafahan’ny tsirairay mahafantatra sy manamora ny fitadiavana ireo toerana rehetra fandraisam-bahiny sy fisakafoana eto Antananarivo sy ny manodidina,
Fisafidianana ny laharampahamehana “Mahamenatra, aza atao sorona ny Malagasy”
“Tena mahamenatra, aza aroso hatao sorona ny Malagasy! Na ny mpanjanan-tany aza tsy nanao tahaka izao ny Malagasy! Taorian’ny fahazoana ny fahaleovantena tamin’ny taona 1960,
Mampihinana ny maloto Tovolahy 3 tratra nanarato teo Anosy
Tovolahy kely miisa 3 no tratra nanarato tondro maloto tetsy amin'ny farihin'Anosy ny 03 Aprily lasa teo. Vao omaly Alarobia ihany koa dia tovolahy iray no mbola tratra nanao izany izay marihina fa ten mampihina-maloto olona.
Kaominina Ambohibao Antehiroka Namoaka boky fitsipika mifehy ny fahadiovana
Misy fitsipika mifehy ny resaka fahadiovana sy fidiovana eny anivon'ny fiaraha-monina fa tsy mandeha ho azy.
Tale Jeneralin’ny CNaPS Notendrena ho mpisolo toerana i Tsaboto Joslina
Voatendry ho tale Jeneraly vonjimaikan’ny CNaPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) indray rtoa Tsaboto Joslina Fridoline, araka ny tapaka tao anatin’ny Filankevitry ny minisitra,
Mpanao gazety Ony Rambelo Marary mafy, mangataka tolo-tanana
Mandalo olana ara-pahasalamana goavana ny namana mpanao gazety Ony Rambelo no sady mpanentana fandaharana iray tao amin'ny RDJ.
Fizarana Vatsy tsinjo Maro ireo tokantrano mitaraina
Tsy mety milamina sy mirindra mihitsy ny fizarana Vatsy tsinjo avy amin'ny Fitondram-panjakana ho an'ireo fianakaviana sahirana.
Tahotry ny ho very fihinana…
Nihazakazaka nanao fanambarana sesilany ireo mpanao politika ao anatin’ny vondrona manohana ny Filoha ankehitriny na ny « Mouvance Présidentielle »,